Iphepha elimhlophe uphendula udaba oluyinkimbinkimbi ngemininingwane nedatha esekelayo. Ngibona amaphepha amhlophe angavele abe okuthunyelwe kwebhulogi. Iphepha elimhlophe akuyona into ofuna ukuthi amathemba ayithole kalula online, kungaphezulu kakhulu kwalokho - ngaphezu kokuthunyelwe kwebhulogi, ngaphansi kwe-eBook.
Iphepha elimhlophe elinamakhasi ama-5 kuye kwangama-25 kufanele kuphoqe kwanele ukuthi ngikuthathe njengegunya nesisetshenziswa sanoma yimuphi umsebenzi. Faka izinhla zokuhlola nezindawo zamanothi ukuze angafundiwe nje noma alahlwe. Futhi ungakhohlwa ukushicilela imininingwane yakho yokuxhumana, iwebhusayithi, ibhulogi kanye noxhumana nabo emphakathini ngaphakathi komzimba womsebenzi.
Transparency - Okokuqala ukutshela umfundi ngokusobala ukuthi uyixazulula kanjani inkinga yabo ngemininingwane ephelele. Imininingwane ilinganiselwe, empeleni, ukuthi kungakuhle bakubize ukuthi unakekele inkinga kunokuzenzela bona uqobo. Abazenzayo bazosebenzisa imininingwane yakho ukukwenza bebodwa…. ungakhathazeki… bebengasoze bakubize nganoma iyiphi indlela. Ngibhale amaphepha ambalwa ekwandiseni ibhulogi yeWordPress - akukho ukushoda kwabantu abangibizayo ukuthi ngibasize bakwenze.